Izimvo Gcina abaTyeleli baFunda iBhlog yakho | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 6, 2007 NgoMgqibelo, Oktobha 25, 2014 Douglas Karr
Bacofe iphepha lakho… bafunda ukungena kwebhlog abezele kuko. Ayikho enye into enomdla kubo. Uyazi ukuba unezithuba ezininzi ezinomdla apho nawuphi na umfundi anokuba nomdla kuzo, kodwa ungazibonisa njani kubafundi bakho abatsha 'abadlula nje'?
Namhlanje ndinetrafikhi emnandi. NdiyiMac, ndiyiPC ndiye kwiphepha eliphambili le- Umtsalane kwaye ufumene ngaphezulu kwewaka hits ukusuka kuloo mthombo wedwa. Ikhutshiwe kwakhona Furl, StumbleUpon, Reddit, yaye Del.icio.us. Ndiza kukunika izibalo ezipheleleyo ngomso kunye nengxelo kubuchule beWordPress yokusebenzela ivolumu ephezulu. Inqaku lam apha yinto eyahlukileyo, nangona.
Le yayiyivolumu ephezulu ngokwaneleyo ukuba ndikwazile ukuhlalutya indawo eyalekwe kuyo kwaye ndibone ukuba abathengi bayaphi kwiphepha lam lasekhaya. Ingxelo yokugqunywa kwesiza yenye apho ukucofa kwahlulwe ngokuzoba kwiphepha lakho lewebhu ukubonelela ngesalathiso esibonakalayo sepesenti yokucofa. Ndabona kwangoko okuninzi konqakrazo olujolise kwiiNkcazo zamva nje kwibar yam esecaleni. Kuyaphela ukuba i-35% yabantu abatyelele iphepha lam lasekhaya bayakuphuma kweli phepha. Nangona kunjalo, i-52.3% emangalisayo yacofa u Izimvo zamva nje kwibar yam esecaleni! Wowu!
Phantse enye i-10% icofe kwiikhomenti zonxibelelwano ngokuthe ngqo kwisithuba ngasinye. Oku kuyamangalisa! Njengomdla njengoko ndicinga ukuba ibhlog yam, iindwendwe zixhomekeke kumagqabantshintshi abanye ukuba zibone ukuba yintoni na okanye ayinamdla kwindawo yam.
Umhlobo wam osuka emsebenzini, uRandy, wandixelela ukuba ufunda kuphela iiposti ezine-1 okanye ezingaphezulu izimvo kwibhlog. Ndacinga ukuba inomdla kwaye ndenza uhlengahlengiso kuloo mxholo ukubonisa inani lamagqabaza; nangona kunjalo, andizange ndikwazi ukulinganisa eyona mpembelelo yezo nguqu.
Namhlanje ndiyakholelwa ukuba ndibonakalisile ukuba zibaluleke kangakanani izimvo, kunye nokubonisa ukuba zingaphi izimvo ezenziweyo kwisithuba ngasinye. Ndingazama nokwenza omnye umsebenzi kwiphepha lam lasekhaya… mhlawumbi uluhlu lwezithuba ezinezona zimvo zininzi kuzo. Iya kukubonisa ukuba imithombo yeendaba zentlalo imalunga incoko
. Ukuthatha isihloko esikhulu kunye nokubhala kakuhle kuyinxalenye ye-equation, kodwa abantu zizinto zentlalo- kwaye bathambekele kwizihloko ezinomdla ezifanayo.
QAPHELA: Ndibaleka ekaTata uRob Marsh Izimvo yakutshanje Faka iplagi. Injalo loo nto… Ubawo Rob ngumfundisi waseRoma! Andikholelwa ukuba amandla e-plugin anayo nayiphi na impembelelo evela Phezulu, kodwa ndiqinisekile ukuba ukholo oluncinci alunakulimaza, akunjalo? Enkosi, Bawo Rob!
tags: iibhlog izimvoukugqabazaizimvoUmxholo oveliswe ngumsebenzisi
Liyinyaniso elokuba, kusoloko kubangel’ umdla ukufunda ngoko abanye baye bagqabaza ngako. Mhlawumbi kuba ibandakanya ingxoxo.
Ndiyavuma. Ndiqaphele oku kwizibalo zam zewebhu kwakhona. Ndicinga ukuba uyilo lwam lwewebhu lunokuhlengahlengiswa ngakumbi ukwenza amagqabantshintshi agqame ngakumbi, ke ngomnye umsebenzi endiwenza ngobusuku obunye 🙂